Ndi akụ na ụba nke emeghari ohuru dị mkpa n'ime GDP na Spain? | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ndi akụ na ụba nke emeghari ohuru dị mkpa n'ime GDP na Spain?
N'ụzọ dị mma, afọ gara aga, na nke abụọ na-esote afọ, ume ndụ na-abawanye onyinye ha na akụ na ụba mba yana ha riri nne Karịsịa ọnụahịa nke ahịa ọkụ eletrik.
O di nwute, ma kwuo okwu na ibe weebụ a, ndi mbibi nke oru na ngalaba a, choro ihe kariri oru 2.700.
1 Ọrụ na Spain
2 GDP na Spain
3 Green ego na ọkụ eletrik ahịa
Ọrụ na Spain
Site na teknụzụ, ndị mepụtara ọrụ kachasị dị na 2016 bụ ifufe (535), fotovoltaic anyanwụ (182), thermoelectric anyanwụ (76), obere ihe ọkụkụ (19), mmiri (17) na obere ifufe (iri na ise) . Agbanyeghị, ọtụtụ ọrụ na ngalaba a na-etinye uche na ọgbọ biomass ike. Igwe na-esote ya, ya na 17.100, yana fotovoltaic nke anyanwụ, ya na 9.900, dịka data nyere Irena (International Renewable Energy Agency).
Na ụwa ndị ọzọ, anyanwụ fotovoltaic bụ nke ahụ nọ n'isi, site na iji mmadụ nde 2,8, nke na-anọchite anya 11% nke ọrụ niile emere site na imeghari ohuru. Ihe nrụnye ikuku na-esote ya, yana ọrụ 1,1 nde.
Irena esetịpụla ihe mgbaru ọsọ imezu atumatu mgbanwe mgbanwe ihu igwe nke na 2030 mmejuputa mmeghari ohuru n'ime ụwa ga-amụba okpukpu abụọ. Nke ahụ ga - eme, site na atụmatụ ya, mee nde mmadụ iri abụọ na anọ nwere ike were n'ọrụ na mpaghara a site na mgbe ahụ.
Dị ka Irena si kwuo, onye na-eji Association nke Renewable Energy Companies (APPA) dị ka isi iyi, mpaghara ahụ sitere na-ebibi arụ ọrụ kemgbe 2008, mgbe emere mmeghari ohuru were ihe dị ka mmadụ 150000 rụọ ọrụ, n'afọ ahụ, edekọtara ọnụ ọgụgụ kachasị elu na mba anyị.
Irena tara ọnọdụ a ụta na "amụma ọjọọ dị na eletrik«, Nke na-eme ka ọnụọgụ ndị ọrụ na ikuku, anyanwụ na biomass na-aga n'ihu ịjụ.
GDP na Spain
Mgbe afọ nke mbelata, ọ dị ka isi mmalite ume ume na-amalite ịbawanye nta nke nta, ịdị arọ ha na akụnụba mba anyị. Dika ihe omumu ohuru nke ikike ikike ume nke Macroeconomic nke Spain mebere kwa ubochi site na Association nke Renewable Energy Companies (APPA), na 2016 mpaghara nyere 8.511 nde euro na GDP, nke nọchiri anya 0,76% nke ngụkọta na mmụba nke 3,3 % tụnyere afọ gara aga.
Site na teknụzụ, nke kachasị nyere aka bụ fotovoltaic anyanwụ (32,37%), nke ikuku na-eso ya (22,38%) na thermoelectric solar (16,45%). Na mgbakwunye, ọ gbakwunyere 1.000 nde na ụtụ Edere ụgbụ na ndezi nde nza nke ọzọ nde 2.793.
Ihe kpatara uto a aghaghi ihu na mmụba nke ọrụ na ụlọ ọrụ a, nke kachasị n'ihi ikuku auctions (500 MW) na biomass (200 MW) na ọkwa nke ego ọhụrụ ndị emere na 2017 na nke nsonaazụ ya, nke doro anya, ga-egosipụta na akụkọ na-esote afọ.
N'agbanyeghị ezigbo data a (nke dị anya na ndekọ ndekọ na GDP na 2012 -10.641 nde, 1% nke ngụkọta-), mkpakọrịta ahụ chọrọ pụta ìhè mkpọnwụ na ume ohuru na-ebi na Spain, ebe ọ bụ na n'ime 2016 niile naanị 43 MW nke ike arụnyere ọhụrụ, ọnụ ọgụgụ kacha nta ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ n'otu oge ahụ.
Green ego na ọkụ eletrik ahịa
Ewezuga mmetụta ha na ọkwa macroeconomic, isi mmalite dị ọcha metụtakwara ọdịnihu nke ahịa ọkụ eletrik na mba anyị na 2016. Ekele dịrị ha, ọnụahịa nke elekere ọ bụla nke megawatt (MWh) zụrụ site na euro 21,5, nke mechaa guzo na 39,67. Dị ka ọmụmụ a si dị, na-enweghị ifufe, anyanwụ ma ọ bụ hydroelectric, MWh ọ bụla gaara efu euro 61,17, yabụ ọnụnọ ha na ngwakọta ahụ na-anọchite anya nchekwa nke nde 5.370 n'afọ niile. Ọnụ ọgụgụ dị mkpa karịa
N'aka nke ọzọ, mmeghari ohuru gbochiri ịtụbata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ tọn tọn mmanụ 20.000, nke gbochiri inyefe nde euro 5.989 ọzọ, ma gbochie nde 52,2 tọn CO2 merụọ ikuku anyị, nke dugakwara ịchekwa nde mmadụ 279 na ikike ịpụpụ.
Anyị na-atụ anya na site na 3 mega-auctions ikpeazụ na steeti, ịdị arọ nke mmeghari ohuru na GDP ga-abawanye, na ọtụtụ n'oge afọ 2 ma ọ bụ 3 na-esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ndi akụ na ụba nke emeghari ohuru dị mkpa n'ime GDP na Spain?
Gịnị bụ ike eletriki?
Obodo ọdịnihu, obodo mara mma